मार्शल लगाएर भएपनि माघ ८ मा संविधान-NepalKanoon.com
मार्शल लगाएर भएपनि माघ ८ मा संविधान
पौष १८, काठमाडौँ । पहिचानपक्षधर ३० दलिय मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनको तयारी बैठकहरुमा काग्रेसरएमाले लगायतका सत्ताधारि शक्तिले मार्शल लगायर माघ ८ गते संविधान ल्याउने तयारी गरेकोले तत्काल आन्दोलनमा जानु परेको बताउन थालेका छन् ।
देशव्यापी आम हड्ताल सहित प्रादेशिक हड्तालमा ओर्लिएका एमाओवादी लगायतका ३० दलिय मोर्चाका मुख्य घटकहरुका बिचमा अहिले यो चर्चा व्यापक छ । आन्दोलन तयारी अन्तर्गत बनेका विभिन्न समितिका बैठकहरु तथा पार्टी एवं मोर्चाका विभिन्न बैठकहरुमा ‘माघ ८ मै मार्शल लगाएर भएपनि प्रतिगामी संविधान घोषणा गर्न लागेको सुइको आफुले पाएको नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक आन्दोलनको तयारी स्वरुप एमाओवादीका बर्षौसम्म नबसेका विभिन्न कमिटिका बैठकहरु समेत बस्न थालेका छन् । ति बैठकहरुमा माघ ८ गते मार्शल लगाएर संविधान घोषणा गरे के गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुने गरेको एमाओवादीका एक विद्यार्थी नेताले वताए ।
एमाले नेता ओली र प्रधानमन्त्रि सुशिल कोइराला बैठकमै आउनै नचाहनु, सभामुखले आफै मस्यौदा बनाउने अधिकार माग्नु र मित्रराष्टहरुको चलखेल बढ्नुलाइ सत्तापक्षको तयारीका रुपमा बुझेका छन् । ‘बैठक र सहतिको नाममा आफूलाइ अल्मल्याउने र आफ्नो तयारी पुरा गर्ने चलाखी काग्रेसरएमालेले गरिरहेको’ ३० दलिय मोर्चाको बुझाई छ ।
एमाओवादी स्रोतका अनुसार काग्रेस एमालेले माघ ८ मै संविधान ल्याउनका लागि पार्टी निकटका अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, भिमार्जुन आचार्य र शम्भु थापाहरुलाई ड्राफ्ट तयार गर्न भनेको छ । डलर खाएको आरोप लाग्दै आएका पत्रकार कनकमणी दिक्षित, एमालेनिकट एनजिओ इन्सेकका अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेल लगायतकाले सहयोग गरिरहेका छन् । आजै शुक्रवार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले विराटनगरमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानिमा ‘संविधान तयार छ, परेको अवस्थामा जारी हुन्छ’ भन्नुले समेत यो कुराको पुष्टी गर्दछ ।
३० दलिय मोर्चाले संविधानसभामा मार्शल लगाएर संविधान ल्याउन खोजिए के गर्ने भन्ने वारेमा निर्णय गरिसकेको स्रोतले बतायो । ‘संविधानसभाका आफ्ना सभासदहरुलाई सडक आन्दोलनका अन्य कार्यक्रममा नखटाउनुलाइ संविधानसभाभित्रैको तयारी’ भनेर बुझ्न समेत बैठकमा भनिदै आएको छ । संविधानसभाभित्र रहेका सभासदले मार्शल लाग्ने स्थितिमा भित्रैबाट समेत प्रतिरोध गर्ने तयारी मोर्चाको छ ।
माघ ८ मा मार्शल लगाएर संविधानसभाबाटै संविधान जारी गरियो भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा एमाओबादीका रुकुम क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित एवं वाइसिएल नेपालका अध्यक्ष गणेशमान पुनले भने ‘सशक्त प्रतिरोध गरिनेछ, फेरी एकपटक एउटा ठुलो युद्धमा जान्छ मुकुक’ । उनको यो भनाइले पनि दुबै पक्षको तयारी पुष्टी हुन्छ ।
के हो मार्शल, कसरी लगाइन्छ ??
संविधानसभा संचालनमा वाधा आउने गरी कुनैपनि अवान्छित कृयाकलाप गरिएमा सभामुखले मार्शल लगाएर संविधानसभा सदस्यलाइ नियन्त्रणमा लिन आदेश दिन सक्छन् । सभामुखको आदेश नै सादा पोशाकमा खटिएका ति प्रहरीलाई अन्तिम आदेश हुने कानुन छ ।
यदी संविधान जारी गर्ने सत्तापक्षको तयारी पुरा भए आफ्नो पक्षमा दुइ तिहाइ हुने आँकलन गरेको छ । पहिचानपक्षधरहरु अल्पमतमा हुने र उनिहरुले संविधान जारी हुने अवस्थामा नारा,धर्ना वा रोष्टम घेराउ गरेमा मार्शल लगाउन सक्ने सभामुखको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । रातोपाटी